Real Madrid Oo Guul 3-1 Ka Gaartay Kooxda Osasuna, Los Blancos Oo Ku Dhow Ku Guuleysiga Horyaalka
HomeWararka CiyaarahaReal Madrid oo guul 3-1 ka gaartay kooxda Osasuna, Los Blancos oo ku dhow ku guuleysiga horyaalka
Real Madrid ayaa hal talaabo u soo dhawaatay horyaalka La Liga kadib markii ay 3-1 ku garaacday Osasuna inkasta oo Karim Benzema uu laba jeer ku fashilmay rigoore.
Real Madrid ayaa u baahan inay guuleysato laba ciyaarood oo kaliya shanta kulan ee u hadhsan, xi loogu calaamo-saaro horyaalka LaLiga.
Saddexda gool oo labadii qaybood ee ciyaarta ay kala dhaliyeen David Alaba iyo Marceo Asensio ayaa guushan u go’aamiyey Real Madrid, halka kooxda garoonkeeda joogtay ee Osasuna ay iyaduna la timid gool ay jawaab degdeg ah kaga bixisay goolka koowaad ee Madrid.
Daqiiqaddii 12aad ee bilowga ciyaarta ayay Real Madrid heshay goolka koowaad oo uu u saxeexay difaaceeda dhexe ee David Alaba oo kubbad uu goolhaye Sergio Herrera uu ku toogtay ay mar labaad dib ugu soo noqotay, isla markaana uu mar labaad ku celiyey oo si nasiib ah ugu dhalatay.
Kubbad uu dhinaca midig kasoo jabiyey Avila ayaa ku dhacday Alaba, waxaana usii dhaaftay Militao oo lugta ka laabtay, kaddibna waxa meel cidlo ah ka helay Budimir oo ciyaarta ka dhigay 1-1 daqiiqaddii 13aad.
Ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada ayay Real Madrid dib usoo ceshatay hoggaanka ciyaarta, waxaanay la timid gool labaad oo uu u dhaliyey Marco Asensio.
Markii lagu soo noqday qaybta labaad ayaa Real Madrid loo dhigay laba rikoodhe oo ay toddoba daqiiqadood u dhexeeyeen, waxaana labada jeerba laagtay Karim Benzema oo awoodi waayey inuu shabaqa gaadhsiiyo.
Goolhaye Herrera ayaa laf-dhuungashay ku noqday Karim Benzema oo ka badbaadiyey rikoodheyaashaas, waxaana uu laacibka reer France garoonka kabaxay isaga oo aan wax gool ah saxeexin.
Vinicius ayaa daqiiqaddii ugu dambaysay ciyaarta waxa uu kubbad ka helay Karim Benzema, waxaanu xerarada ganaaxa ugu dhiibay Vazquez oo si qurux badan u dhamaystiray.
Real Madrid ayaa yeelatay 78 dhibcood oo ay ka urursatay 33 ciyaarood oo ay dheeshay, waxaanay 17 dhibcood dhibcood ka horreysaa kooxda kusoo xigta oo ah Atletico Madrid oo labaad fadhida.